UJOEL CORRY 'UNOMBULELO' KUGEORDIE SHORE NJENGOKO ESIYA KWIIMBASA EZININZI ZASEBRITANE - IINDABA
UJoel Corry utyhile ukuba unombulelo kuGeordie Shore ngokumnika iqhekeza lodumo njengoko esiya ephumelela amanqaku ama-Brit Awards ngoLwesibini ebusuku.
U-DJ kunye nomvelisi ube nempumelelo enkulu kwitshathi kule minyaka imbalwa idlulileyo ngokubetha njengo-Uxolo, iNtloko kunye neNtliziyo kunye neBhedi nangona kunjalo bekuphantse kwalishumi kwiminyaka edlulileyo ukuba avele okokuqala kwizikrini kumdlalo we-MTV osekwe eNewcastle.
UJoel wayeyinkwenkwe yexesha elide yeGeordie Shore eyiyo uSophie Kasaei kwaye wabonakala ngokulandelelana okumbalwa, kwanokuhambisa isandi kwimisitho emininzi yasekhaya nakwiminyaka emihlanu yokuzalwa komboniso.
Ixesha elinomtsalane 3 isiqendu 10
Ngelixa esi sibini singakhange sihlangane kangangeminyaka eliqela ngoku, uSophie uvuyisene esidlangalaleni noJoel kwimpumelelo ebenayo ukuza kuthi ga ngoku kwaye ubuchwephesha bakhe bunokuphakama nangakumbi ngoLwesibini njengoko esiya kuzuko kwiiklasi ezintathu eBrits.
inkwenkwezi yetrek kobayashi maru
Sayina ungene kupapasho lwethu lwasimahla ukuze ufumane ezona nkcukacha zakutshanje ze-What's On ezivela kwindawo yonke.
Kuthatha nje imizuzwana ukujoyina-cofa nje kule hyperlink, faka isivumelwano sakho se-imeyile kwaye ugcine umkhombandlela.
Ukuba uguqula iingcinga zakho uya kuba nakho ukungabhalisi usebenzisa i-hyperlink ngasemva kupapasho ngalunye esiluthumelayo.
Umtyunjwa wase-Britane uJoel ukhuphiswano lokuphumelela kwi-Male Male, i-Britane engatshatanga (yeNtloko neNtliziyo) kunye nokuBonakala kwaye wabonakala kuLorraine njengoko wayexhobele ixesha lakhe elikhulu ebusuku.
Umninimzi uLorraine Kelly uthe kuye: Ufike apha ukuze siqwalasele uGeordie Shore ixesha elide elidlulileyo ngoku.
Ngaba i-yandy kunye ne-mandeecees batshatile
Kodwa ngento enye enjalo, intle njengesiphumo sayo iya kukunika ingqwalaselo kwaye abantu ngabanye 'oh ndiyayithanda loo ndoda' nangona kunjalo likrele elintlangothi-mbini kwezinye iindlela.
Abantu bahlala bethe qwa malunga nokwenzeka kumabonakude ngokubanzi nangona kunjalo uvumela umculo ukuba uxoxe.
UJoel uphendule wathi: Ndijonge kwakhona, ndiyabulela ukuba bendinalo olo papasho.
Ndikhumbula ngolu hlobo ebomini bam, nangona kunjalo yeyona nto bendifuna ukuyenza ngawo onke amaxesha.
Nawuphi na umceli mngeni ondinike wona undenze ndakhuthazeka ukuba ndisebenze ixesha elide.
umdala kangakanani rocco piazza
UJoel ujongene nabantu abakhuphisana nabo kwizinto ezifana noCeleste, uHarry Styles, uDua Lipa no-AJ Tracey kwiiklasi zabo kunye neebhuki zeBrits ezingamfumananga njengoyithandayo yokuphumelela nakweyiphi na kuzo.
Nangona kunjalo, iBrits ngalo lonke ixesha ithanda ukothuka okuninzi ke musa ukuyilawula into ngaphandle.
Izigaba: Hollywood Hulu Iindaba
UMichael ubonakalisa ixabiso elifanelekileyo
I-fedex ivaliwe ngosuku lomsebenzi
utshatele phi uElvis
utyumbo lwabakhuluwa babaphangi
iivenkile ezinkulu zivuliwe ngosuku lomsebenzi